Isebenza kanjani i-Watch Rapport
Thenga ngokuphepha ngenxa
Izinkulungwane zamawashi zithengiswa emhlabeni jikelele
Ukubuka konke kwenqubo yokuthenga
Umhlahlandlela wakho ophelele wokuthengiselana okubushelelezi nokuphumelelayo.
Ochwepheshe bethu abazimele abaqinisekisa
ukuthenga kwakho, ukuze ukwazi ukuthenga
ngokuzethemba okuphelele. Funda kabanzi
Ukubuka konke kokulethwa
Isikhathi sokuthumela nokulethwa kokulethwa noma izinsuku kungahluka ngokuya ngokutholakala kwento nendawo. Idethi yokulethwa elinganiselwayo ingatholakala ekhasini lohlu lomkhiqizo ngaphambi kokungeza into yakho enqoleni.
Uma into oyithengayo ifanele ukulethwa kwasendaweni, uzoba nenketho yokukhetha ukulethwa kwendawo ekuphumeni. Ukulethwa kwasendaweni kutholakala kuphela endaweni yaseGreater Los Angeles okwamanje.
Uma into oyithengayo ifaneleka ukuthathwa endaweni, uzoba nenketho yokukhetha iveni yendawo ekuphumeni. Uma i-oda selilungile, sizoxhumana nawe ukuhlela usuku nesikhathi sakho sokuthatha.
Inqubo elula yokubuyiselwa imali
Isiqinisekiso sokubuyiselwa imali esingu-100%
Ungakwazi qala ukubuya noma ucele ukubuyiselwa imali nganoma yisiphi isikhathi ngenkathi ucutshungulwa nge-oda lakho uma ungazange unikezwe imininingwane yokulandela ngomkhondo noma ubufakazi bokuhamba.
Ukubuyiselwa kwemali nama-Credits
Izimbuyiselo zicutshungulwa kungakapheli amahora angama-24-48 yi-Watch Rapport. Izikweletu ze-akhawunti ngokuya ngesikhungo sakho sezezimali zingathatha izinsuku ezifika kwezingu-10 zebhizinisi kungafaki izimpelasonto noma amaholide asebhange.